लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै महिला माथि महिलाले गरे यसरि बला!त्कार,प्रहरी पत्रकार चकित (भिडियो सहित) -
लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै महिला माथि महिलाले गरे यसरि बला!त्कार,प्रहरी पत्रकार चकित (भिडियो सहित)
२० वैशाख, काठमाडौं । केहि दिन यता मिडियामा निकै नै चर्चामा आएका लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडा बिचको आन्तरिक कुरा ल्याएर मिडियाबाजी भएको छ । किशोर खतिवडाले लक्ष्मी गदाल माथि अन्याय गरेको भनेर मिडिया बाजी भैरहदा बिभिन्न अडकल बाजी भएका थिए । चौतर्फी मिडियामा आलोचना आए पछी स्वयम लक्ष्मी गदालले फेरी मैले किशोर खतिवडा माथि गरेको झुठ हो । मलाई कसैले उचालेर मैले यसरि खतिवडा माथि खनिन पुगेकी हु । मलाई क्षमा गर्नुहोस भनेर मिडियामा बोलिसके पछी यो घट,नाले अर्को रुप लिएको हो । महिला अधिकार कर्मी सृजना वाग्लेले सवै नाटक गर्न लगाएको हो भनेर लक्ष्मी गदारले भनिसके पछी किशोर खतिवडाले एक्सन लिएर बसेका थिए । मलाई किशोर जिबाट अ,न्याय भएको छैन ।
हिड्दै जादा ठेस लाग्छ तर मेरो जिबनमा आच आउने काम भने भएको छैन । हामि केहि बर्ष देखि रिलेसनमा बसेको कुरा सहि हो तर जति मैले मिडियामा आएर बोल्न नहुने कुरा जतिपनि बोलेकी थिए । यो सबै झुठ हो । मलाई पैसाको लागि तलाई अ,न्याय भएको छ भनेर मलाई नाटक गर्न लगाईएको हो । महिला अधिकार कर्मी सृजना वाग्लेले नानाथरी नाटक गर्न लगाएको हो । मन्दिरसम्म पुर्याएर बेहुलीसम्म बनाएकी हुन् । भनेर अन्तरबार्तामा बोलिसके पछी सृजना वाग्ले मिडियामा आएकी थिन । म माथि अ,न्याय भयो मैले उद्दार गर्न खोज्दा किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदाल मिलेर मेरो मान हा,नि गरेका छन् भनेर मिडिया आएकी थिइन् ।
किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालको एक अर्का बीच सहमतिमा भैसकेको छ । तर तत्काल लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै सृजना वाग्ले सहितको समुहले लक्ष्मी गदालमाथि हिजो भौतिक आक्र,मण भएको छ । एक पछी अर्को झु,ठको पर्दा,फास हुन् थाले पछी असैया हुन् थाले पछी एग्रेसिप हुदै गदाल माथि हातपात गरेको हुनसक्छ । योजनाबद्द रुपमा गदालको घर सम्म पुगेकी सृजना वाग्लेले गदाल बस्ने रुम तोडफोड गरि ४/५ जनाको समुहमा गैर लक्ष्मी गदाललाई कालो मोसो समेत दलेकी छन् । आफै महिलाअधिकार कर्मी भएर यसरि योजनाबद्द रुपमा हमाल गर्नु जायज कुरा भने हैन । यदि सृजना माथि अ,न्याय नै भएको थियो भने कानुन समातेर अगाडी बढ्नु पर्ने हैन र ? प्रेस काउन्सियलमा जानु पर्ने हैन र ?
जे जस्तो भएता पनि यो घट,नाको नालीबेली हेर्दा सृजना वाग्ले नै गलत साबित बहेकी छन् । योजनाबद्द रुपमा मिडिया लिएर अर्काको घरमा बसेको स्वतन्त्रता माथि आच पुरेउने काम राम्रो हैन । सृजना वाग्लेको बोल्ने भाषाशैली,र गदाल माथि गरेको जघन्या अप,राधसंगै तथानाम गालीगलौज मिडियामा आईरहदा सृजना वाग्लेले सजाय भोग्ने पर्ने देखिछ । यतिबेला जतातातौ मिडियामा वाग्ले प्रति घोर आपति जनाएका छन् । हेडलाईन नेपाल देखि बिभिन्न युटुब च्यानलमा देख्न सकिन्छ गतिबिधि ।
Previous कोरोनाका कारण बिश्व नै बिचलित ! श्रीमतीको श,व बोकेको भाइरल तस्वीर,खास कारण यस्तो पो छ
Next दु:खद खबर ! झ्याल-ढोका बन्द गरेर कोइला बाल्दा दिदीको मृ,त्यु, आमा र सुत्केरी बहिनी बे!होस